IETT Readgbọ Ha Dị Njikere Maka Oge oyi | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulUgbo ala nke IETT Jikere Udo
09 / 12 / 2019 34 Istanbul, IETT, General, Ụzọ Awara Awara, oru, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metrobus, Turkey
iett ngwaọrụ ejikere mkpụmkpụ
Ngwakọta 6 puku 154 XNUMX nke ejikọtara na IETT dabara na taya igwe oyi na-agbaso ụkpụrụ. A na-enyocha ndị na-efesa ya ma tinye mmiri na mmiri. Usoro kpo oku na ugbo ala. Enyochare wiwi na akàrà ndị dị na sistemụ ahụ n'otu n'otu… ugbo ala IETT adịla njikere maka oge oyi.
Site na nmalite oge udu mmiri na Disemba, ihe achọrọ maka taịlị n'ọdọ ụgbọ ala azụmahịa malitere. İETT, Bus Inc. na 6 puku 154 ugbo ala jikọọ nke Private Public Bus Enterprises dị njikere maka oge oyi. A ga-eme ihe ị ga-eme iji gbochie nsịntị mmiri ga-adị na nchikota ya na obodo ukwu nke Istanbul na AKOM. AKOM na-agbago iji meghachi omume na-agbanwe nsogbu ngwa ngwa na-aga n'ihu na ndị ọrụ ikike 7 awa na ụbọchị 24.
Kedu mpaghara na agbataobi nwere nsogbu na afọ ndị gara aga, ahịrị, ụzọ, okporo ụzọ na okporo ụzọ nwere ike ibute oke snow. Maka isi ihe ndị a, ebe ebumatubere nnu nnu dị, ebido nyefe nnu n'ime nyiwe.
SNETON INWE NYERE NA NRỌ
N'ihe banyere ịdọ aka na ntị snow, e mere atụmatụ na ndị na-ekiri snow pụrụ iche ga-amalite ịrụ ọrụ na 03.00 n'abalị. Ndị na-ekiri ihe a, ha na AKOM ga-arụ ọrụ ịchọpụta ebe achọrọ nnabata ọfụma tupu bọs na-aga, ma zere ịnwe ike daa.
E mekwara usoro dị oke egwu nke ọtụtụ ihe gbadara agbada iji gbochie mmetụta ọjọọ nke snow. N'ime ogo a, a ga-etinye ngwa ogwugwu snow na ugboala nzaghachi mberede nke 3. Ọrụ ndị a ga-arụ na pọmpụ snow 21 na ụgbọ ala xNUMX na-aga n'okporo ụzọ Metrobus ga-abụ İBB Mmezi na Ndozi Ntọala na İETT. Emeputara uzo nkwado nnu na isi 3 n’akuku uzo ano nke 44 kwusiri okuku. Iji gbochie ndị njem ịwụrụ akpụrụ mmiri na ngafe, e zigara akpa nnu na ọdụ ụgbọ mmiri iji rụọ ọrụ mgbe ọ dị mkpa.
Na mgbakwunye, Fleet Management Center mere atụmatụ maka ụgbọ elu ndị ọzọ iji mezuo njem njem nke isi akwara ndị ahụ nwere ike ịbawanye na ọnọdụ oge oyi.
Ntucha 50 pụtara njem nke IETT na Eid al-Adha
Nleba Onwe Onye Mgba: Nleta Ahụike Onwe Onye Nke Ndị Anabatara na IETT Ve…
Ndị Turkey na-adị njikere maka ugbo ala
Nkwalite na-eme ka ụlọ ọrụ ọhụrụ nke ọhụrụ maka ndị ọrụ ụgbọ oloko
Mbuli elu na Karşıyaka Constructionrụ otu ahọm na ugbo ala nke ga-arụ ọrụ n’ahịrị abụọ a
Kwadoro IETT 2017ye njikere
IETT ga-ezipụ kaadị azụmahịa nke ndị agadi gaa adreesị
IETT na Mahadum Medinayet nabatara nkwanye ùgwù maka Okenye na ihe di iche iche
IETT iji kwado oru ugboala nke ugbo ala nke ITU
Nzaghachi nye İETT nke -zụchaghị nkwụghachi ụgwọ ụgbọ
Ọha Mmadụ Ọha